Amnesty International oo dhaleecaynaysa Iswiidhan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amnesty International oo dhaleecaynaysa Iswiidhan
"Waddankoodi ayey qaxooti ku noqdeen"
La daabacay måndag 29 februari 2016 kl 14.45
Amesty International ayaa dhaleecaynaysa Iswiidhan oo diidmo siisa qaxootiga soomaaliya ka yimaada.
-Soomaaliya ayaa ah waddan amaan ka jirin, dadka ay Iswiidhan halkaas u masaafuriso khatar ayey ku suganyihiin madama la dejiyo gobolo aan ahin kuwi ay ka yimaadeen, tan ayaa keenaysa in ay dadkani dabeetana qaxooti ku noqdaan waddankoodi, xuquuqahooda na la qimeeyn, ayey sheegtay Madelaine Seidlitz oo qareen ka ah l´aanta xuquuqda aadanaha Iswiidhan Amnesty International.
Ururkan ayaa todobaadkii hore dhaleecayn xoog leh u gudbiyay Iswiidhan markii ay soo bandhigeen warbixintii sanadlaha 2015 ee ku saabsana xuquuqaha binaadinka. Halkaas oo ay baadhitaan ku sameeyen 160 waddan.
Madeleine ayaa u jeeda in ay Soomaaliya 20 sanno ee ugu dambeeyay tahay waddan khatar ah, sababta oo ah in nidaam dimoqraati ah waddanka laga dhisin wixii ka dambeeyay bilowgii dagaalki sokke. Afqaanistaan iyo Iraq ayaa ka mid ah waddamada dhibaatadan haysta, ayey u jeeda Seidlitz oo qareen ka ah Amnesty International.
Wexey sheegtay in ay baadheen dhowr diidmo ay heeyada socdaalka siisay soomaali Iswiidhan sharci ka codsatay, laakin ay iyagu u arkan khalad in soomaaliya dadkan lugu ceeliyo.